Inqolobane ekuthiwa yiFarriers ekufutshane neStiffkey, eNorfolk - I-Airbnb
Inqolobane ekuthiwa yiFarriers ekufutshane neStiffkey, eNorfolk
Cockthorpe, England, United Kingdom
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguStuart
Uvimba onomtsalane otshintshiweyo kufutshane nonxweme lwaseNorfolk (indawo yobuhle bendalo obubalaseleyo), kwindawo ethe cwaka enegadi enkulu.
Ilitye elimnandi lemveli laseNorfolk kunye nethayile yethayile, iguqulwe ngovakalelo yaba likhaya elihle leholide, ibekwe umva ukusuka kwindlela kumda we-hamlet ezolileyo kakhulu. Vula ikhitshi / isidlo sangokuhlwa esivulekileyo kunye nendawo epholileyo yokuhlala enesitovu samaplanga. Igumbi lokulala eliphindwe kabini. Indawo enkulu yokupaka kunye negadi evaliweyo. Ilungele isibini esinenja.
I-Cockthorpe yi-hamlet ekumgama weemayile kumhlaba ukusuka eStiffkey naseMorston kunxweme oluhle lwaseNorfolk, indawo yoBubuhle beNdalo obuBalaseleyo. Ezona ndlela zimbini zohambo zingcono ukusuka endlwini zehle ngendlela eya e-Cockthorpe Common, kuMlambo i-Stiffkey ukuya kumadiza etyuwa phezu kwendlela yonxweme; okanye ngaphaya kwebala lomoya kunye nokwehla kwendlela eya eBinham apho kukho ivenkile yelali egqwesileyo kunye nevenkile yobisi yasefama ecaleni kweBinham Abbey entle. Kukho imyuziyam enomdla yexesha lemfazwe (iLangham Dome) kwibala leenqwelomoya ngaphandle nje kwelali, elinoxolo kakhulu kwaye lilinywa lusapho lwasekhaya olulinywayo nolufuya iigusha. Indlu imiselwe umva iiyadi ezili-100 ukusuka kwindlela ekufutshane nezinye iindlwana ezimbini, kunye negadi ephangaleleyo enengca kunye nedama elibiyelweyo. Enye ilali ehamba kwibala leenqwelomoya yakudala ivuzwa ngowona mbono ulungileyo eNorfolk - yonxweme kunye neBlakeney Point.
Uncedo lungafumaneka ngexesha longxamiseko ngumntu ococayo/umnikazi wesitshixo, okanye ukuphendula imibuzo. Nangona kunjalo, akangomntu wasekuhlaleni ngoko nceda ulumke ukuze ungazitshixeli! Iinkcukacha zakhe zifakwa kwisiqinisekiso sokubhukisha. Ngamanye amaxesha sisebenzisa esi sihlomelo kwaye sabelana ngendlela yokungena.
Uncedo lungafumaneka ngexesha longxamiseko ngumntu ococayo/umnikazi wesitshixo, okanye ukuphendula imibuzo. Nangona kunjalo, akangomntu wasekuhlaleni ngoko nceda ulumke ukuze ungaz…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cockthorpe